eNasha.com - शरीरमाथि रेल दगुर्दा पनि ज्यूँदो
अमेरिकाको अलाबामा राज्यस्थित एक व्यक्तिले आत्महत्या गर्न खोज्दा पनि पाएनन् । कारण अरूले रोकेकाले चाहिँ होइन । बरू उनीमाथि रेल कुदे पनि उनलाइ सामान्य चोट पटकबाहेक अन्य कुनै किसिमको पनि गम्भीर चोट नलागेकाले उनी बाँचेका हुन् ।
उनी चटके पनि होइनन् तर पनि यस्तो भएकोमा प्रत्यक्षदर्शीहरू चकित छन् ।
हुन पनि उनी जस्तो भाग्यमानी को होला र ? उनको हिसाबमा दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ । तर रोचक चाहिँ के छ भने ६१ वर्यीय यी बूढा आरनोल्ड रोमिन रेलको पटरीमा सुतिदिए । तर उनी लिकमा चाहिँ सुतेनन् । यही नै उनी बाँच्नुको सबैभन्दा रोचक कारण बनिदियो । (यस्ता पनि हुन्छन्, आत्महत्या गर्न नजान्नेहरू !!)
उनीमाथि ट्रेनको आठ वटा डिब्बाले धक्का दिइसकेको एपी समाचारमा जनाइएको छ ।
तर घटनालाइ नजिकबाट हेरिरहेका व्यक्तिहरूले उनलाइ थप घाइते हुन नदिन तुरून्त एम्बुलेन्स बोलाइ अस्पताल पठाइदिए ।
उनलाइ निको भइसकेपछि परिवारका सदस्यहरूले हन्ट्सविल अस्पतालबाट घर लगेका भए पनि के दुःखका कारण आत्महत्या गर्न खोजेका हुन् भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर प्रत्यक्षदर्शीहरू उनलाइ केही नभएको देख्दा चकित परेको समाचारमा जनाइएको छ ।
फट्याइँ उदेकलाग्दो सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल भव्यता माया इन्टरनेट नग्नता हलिउड उदारता मूर्ख्याइँ बलिउड मुद्दा मामिला विज्ञापन परिस्थिति प्रविधि कीर्तिमान उपाय सेक्स